Christine Razanamahasoa : Voatery noroahana tetsy Amparibe -
AccueilRaharaham-pirenenaChristine Razanamahasoa : Voatery noroahana tetsy Amparibe
07/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nilaza ho tsy nahazo fampandrenesana ny amin’ny tokony hialany ao amin’ny tranom-panjakana nobodoiny aman-taonany hono i Christine Razanamahasoa. Azo avadika ho fitaovana sy paikady politika daholo moa ny zava-drehetra eto amintsika saingy ny tantara irery ihany no tsy azo hovàna sy mipetraka.
Milaza ho tsy nahazo fampandrenesana mialoha ny amin’ny tokony hialany tao amin’ilay tranom-panjakana etsy Amparibe i Christine Razanamahasoa. Voatery niroso tamin’ny fandroahana ny tenany sy ny fananany tao ny fanjakana omaly maraina. Voalohany aloha nahazo fampandrenesana avy tamin’ny ministeran’ny Vola ny tenany ny faha-10/08/2014 nilaza taminy fa tapitra ny fe-potoana ahafahany mijanona ao amin’ny trano. Nangataka fe-potoana fanampiny i Christine Razanamahasoa ny datin’ny 15/12/2014 nangataka fe-potoana izay novalian’ny ministera ka nahazo iray volana fanampini ny datin’ny 06/01/2015 hatramin’ny 15/01/2015. Mbola nandefa taratasy hatrany ny fanjakana ny datin’ny 09/03/2015 (minisitra Gervais Rakotoarimanana) nampahafantatra fa tokony hiala ao amin’ny trano amin’izay ity ministry ny Fitsarana HAT ity ary mbola nohamafisin’ny taratasy datin’ny 11/10/2017 indray izany. Faharoa, fa angaha tsy mba mahatsapa tena mihitsy hoe tokony mba miala satria efa tsy fanjakan’ny mpanongam-panjakana intsony no mitondra ny tany sy ny firenena?
Etsy an-danin’izany, apetraka amin’i Christine Razanamahasoa ny fanontaniana manao hoe: “angaha moa mba nahazo fampandrenesana i Moxe Ramandimbilahatra sy Guy Rivo tamin’ny fotoana nandorana sy nandrobanareo mpanongam-panjakana ny trano fonenan’izy ireo?”. Tsy nisy afatsy lavenona sisa no azon’ny tompon-trano noraisina, izay tsy voaroba sy nangalarina nodorana may kila forehitra ary nihobiana sy nandihizanareo teny amin’ny kianjan’ny 13 May mihitsy izany fahavoazana nahazo ireto mpanao politika roalahy ireto tamin’izany fotoana.
Fa ny tena loza tamin’izao raharaha izao dia nentin’i Christine Razanamahasoa teny amin’ny Fitsarana ny raharaha. Nampiditra taratasin’ady teny amin’ny Filan-kevi-panjakana mba tsy hialana ao amin’ny trano ny tenany ny 18/03/2015. Hita taratra amin’izao fihetsik’i Christine Razanamahasoa fa tena feno tokoa ny fepetra maha mpanongam-panjakana mpiara-dia amin’i Andry Rajoelina ny tenany, mpanao bontolo sy mpibodo zavatra tsy an’ny tena tsotra izao. Azia moa no tsy ho ratsy endrika ny Fitsarana eto amintsika, tahaka izao ataon’i Christine Razanamahasoa izao. Mazàna tokoa mantsy tsy mba mety mahatsapa tena ny olona sasany amin’ny fibodoana ireny fananam-panjakana ireny (trano, fiara, sns) ka voatery miroso amina fepetra hentitra hatrany ny mpitondra manaisotra izany.